အကျည်းတန်သစ်တစ်ပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အကျည်းတန်သစ်တစ်ပင်
- Mg Yay Chan
Posted by Mg Yay Chan on Jan 20, 2013 in Drama, Essays.. |0comments
သစ်ပင်တစ်ပင်သည် သစ်ပင်တစ်ပင်သာဖြစ်သည်ဟု လွယ်လွယ်ထင်မှတ်နိုင်သော်လည်း ထိုသစ်ပင်တစ်ပင်က ပြောသောရာဇ၀င်သည် တခမ်းတနားရှိနေတတ်ပါသည်…၊၊ ကျွန်တော်နေထိုင်ရာအိမ်ခြံဝင်းသည် အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေ ၊၊သို့သော် သစ်ပင်စိုက်ရန်ဝါသနာထုံ
တည်လာခဲ့သည် ၊၊ရှောက်ပင် ၊ မာလကာပင် ၊ ရဲယိုပင်မှ အစ နှင်းဆီ ၊စံပယ်စသော ခပ်အုပ်အုပ် အပင်ငယ်လေးများအထိ ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းထဲတွင်ရှိနေပါသည် ၊၊
သရက်ပင်ဟူသည်ဘာမှထူးထူးခြားခြားအပင်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းလူတိုင်းသိပါလိမ့်မည်၊၊ အခြား၊အခြားသောအပင်များကဲ့သို့ပင် အကိုင်းအခတ် ၊ရိုးတံ ၊အရွက် ၊ အမြစ် ၊ပင်စည် ၊ အသီးအပွင့် စသည်တို့ ပေါင်းစပ်၍ဖွဲ့စည်းထားခြင်းပင်၊၊ သရက်ပင်ကြီး၏ပင်စည် သည်လည်းကောင်း ၊အကိုင်းအခတ် အရွက်များသည်လည်းကောင်း
ကဗျာတစ်ပုဒ်စပ်ဆိုရလောက်အောင် နုရွလှပနေသည်မဟုတ်ပေ…၊၊ ထိုသို့သာမန်သာဖြစ်သည့်မထူးဆန်းသောသစ်ပင်အိုကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်
ဂရုတစိုက်ကြည့် မိခြင်းသည်သာ ထူးဆန်းကောင်းထူးဆန်းနေပေလိမ့်မည် ၊၊
……………….. …………… …………….
တွယ်တာမိသည်၊၊ သူ့အသက်သည် ကျွန်တော့်ထက်ပင်ကြီးပါသည်၊၊အနည်း ဆုံးနှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်တော့ ရှိပေလိမ့်မည် ၊၊အပင်ကြီးသောအခါအရိပ်ရရန် အသီးစားရန်ရည်ရွယ်၍ကျွန်တော်မမွေးခင်ကာလ သည်အိမ်လေးတွင် စတင်နေထိုင်ခါစတည်းကကျွန်တော့်အဖေစိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုသရက်ပင်ကြီးကို မြတ်နိုးတွယ်တာမိခြင်းမှာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ထိတွေ့ရင်းနှီးခဲ့သောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊၊ကျွန်တော်မူလတန်းကျောင်းသား ဘ၀ကထိုအပင်ပေါ်မှပြုတ်ကျ၍သွားတစ်ချောင်းကျိုးခဲ့ဖူးသည်၊၊ သို့သော်
အပင်ကြီးကို စိတ်မနာမိ၊၊မမုန်းမိပေ၊၊အဖေကနောက်တစ်ခါ အပင်ပေါ်ထပ်တက် ပါက ရိုက်မည်ဟု ဘီလူးကြိမ်း ကြိမ်းထားသည့်ကြားမှ ကျွန်တော်အပင်ပေါ်ခိုးခိုး တက်ခဲ့ဖူးသည်၊၊မလုပ်နဲ့ဆိုသောအရာကိုလုပ်လိုက်ရသည့်အရသာ မှာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသလိုရင်ခုန်ဖွယ်လည်းဖြစ်၏.၊၊
ကျွန်တော် ခြောက်တန်း ၊ခုနစ်တန်းလောက်ရောက်ချိန်တွင်တော့ သရက်ပင်ကြီးသည်ပိုမိုခန့်ညားလာပါသည်၊၊သရက်ပင်အောက်တွင်ခုံလေးချ၍ စာအုပ်တစ်အုပ်ထိုင်ဖတ်နေရသောအရသာသည် နတ်ပြည်ခဏရောက်သလိုပဲ..၊၊ သရက်ပင်ကြီး၏အရိပ်အောက်တွင် ထိုသို့ခိုလှုံ၍အေးမြခဲ့ဖူးသည်၊၊ ကြည်နူးခဲ့ရဖူးသည် ၊၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်မိုးဦးကျချိန်ကသရက်ပင်ကြီး၏ဘေးကိုင်းလေးတစ်ကိုင်း ကျိုးကျသွားခဲ့သည်၊၊ ထိုစဉ်က အကိုင်းကျိုးသွားသောသရက်ပင်ကြီးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်နှလုံးသားတစ်ခြမ်းပဲ့ပါသွားသလို ခံစားခဲ့ရသည် ၊၊ဤမျှအထိ
သရက်ပင်ကြီးကိုမှီခိုနေကြရသောသတ္တ၀ါငယ်လေးများလည်းရှိပါသည်၊၊သရက်ပင်ကြီး၏ပင်စည် အထက်ခပ်မြင့်မြင့်တစ်နေရာတွင် ပျားအုံသေးသေးလေးတစ်အုံရှိသည်၊၊အပင်ခြေရင်းတွင်မို့မောက်နေ
သည့်ခြအုံတစ်အုံရှိသည်၊၊ကျွန်တော့်အဖေသည် ထိုခြအုံကိုဖြိုပစ်ရန်စိတ်ကူးသော်လည်း အဖေကသူများ
အိမ်မဖျက်ကောင်းဟု ဟန့်တားသောကြောင့်ဒီအတိုင်းပင် ထား ထားပါသည်…၊၊သေချာကြည့်မည်ဆိုပါက
သရက်ပင်၏ပင်စည်ပေါ်တွင်လည်းတရွရွပြေးလွှားနေကြသောပုရွက်ဆိတ်ကလေးများကို မြင်တွေ့ရပေမည် ၊ ၊ထိုသတ္တ၀ါငယ်လေးများအတွက်မူ သရက်ပင်ကြီးသည်မှီတင်းနေထိုင်ရာဖြစ်သော တိုင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်..၊၊
………………. …………. …………………… …………………..
ဇန်န၀ါရီ ၊ဖေဖော်ဝါရီလောက်ရောက်ပြီဆိုပါကသရက်ပင်ကြီးတွင်သရက်ဖူးကလေးများစတင် ဖူးလေပြီ..၊၊ထိုအချိန်သည်သရက်ပင်ကြီးအတွက်အလှတရားတို့ပိုမိုပြည့်စုံလာချိန်ဟုထင်မိပါသည်၊၊မိုးဦးမကျ
မီလောက်တွင် သီးကင်းလေးများစတင်သီးလာလေ့ရှိသည်..၊၊သရက်ပင်ကြီးသည် အသီးလှိုင်လှိုင်သီးသော
အမျိုးကောင်းသည့်အပင်မို့လားမသိ ၊၊ထိုအချိန်ကျလျှင်အကိုင်းတိုင်း၊အကိုင်းတိုင်းတွင်အဖူး ၊ အငုံတို့ဖြင့်ဝေ
သရက်ဖူးကလေးများ ကျန်နေတတ်သေးသည်၊၊ကျွန်တော့်အမေသည်သရက်သီးအလွန်ကြိုက်သည်၊၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ခူး၍စားတတ်သည်သလိုအိမ်နီးချင်းများကိုလည်း ဝေပေးတတ်သောအကျင့်ရှိသည်၊၊
အသီးတွေမို့ခူးရန်လက်လျော့ထားခြင်းဖြစ်မည်၊၊ခူးရန်လည်း မလွယ်ကူ ၊ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရပေမည် ၊၊
သရက်သီးခိုင်ကြီးသည်နေ့စဉ်နေ့စဉ် ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ၀င်း၍၀ါလာသည်၊၊၀ါ၍မှည့်လာပြီ ၊၊သို့သော် ယခင်အတိုင်းပင်တစ်လုံးတစ်လေမှမကြွေကျနိုင်သေးပါ ၊၊ထိုအခိုင်ကြီး၏သရက်သီးများအနက်
ကျွန်တော်သည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထိုသရက်သီးခိုင်ကြီးကို မော့ မော့ကြည့်ဖြစ်၏..၊၊အညှာခိုင်လွန်း၍ထင်သည်၊၊
တဖြည်းဖြည်းပို၍ပို၍မှည့်ဝင်းလာသော်လည်းမကြွေကျနိုင်သေးပါ၊၊ကျွန်တော်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောသရက်ပင်ကြီး တွင်လတ်ဆတ်သစ်လွင်သည့်အသီးများဖြင့်သာ ဝေေ၀ဆာဆာရှိစေချင်မိသည်..၊၊ အသီးတို့သည်ပုပ်နေပါက
…………………. ……………. ………………….. …………………………….
ကြယ်တို့မည်သည် ကြွေ၍ကြွေ၍သွားပေမည်၊၊လူတို့သည်လည်း နောက်ဆုံးတွင်သေ၍သေ၍သွားပေမည်၊၊
ကျွန်တော် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သည်၊၊ထို့ကြောင့် မှည့်ဝင်း၍ကြွေချိန်လွန်နေပြီဖြစ်သောသရက်သီးခိုင်ကြီးကို
မည့်သည့်အချိန်တွင်ကြွေလိမ့်နိုး ၊ကြွေလိမ့်နိုးဖြင့် သရက်ပင်ကြီးကို နေ့စဉ်နေ့စဉ်တိုင်း
About Mg Yay Chan
Mg Yay Chan has written3post in this Website..
ကဗျာ ၊ ၀တ္ထုတိုတွေကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းရေးသားနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်။
View all posts by Mg Yay Chan →